20 / 09 / 2018 /0 မှတ်ချက်/i နာတာရှည်နာကျင်မှု/av ရေတံခွန်
Fibromyalgia သည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုခက်ခဲစေနိုင်သည်။ fibromyalgia ရှိသူများစွာသည်ရေပူရေကန်ထဲ၌လေ့ကျင့်ခြင်းမှကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဤအကြောင်းပြချက်များစွာသည် - ဤဆောင်းပါး၌ဤအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာသွားပါမည်။
ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များ၌ပြင်းထန်သောနှင့်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုများသည် fibromyalgia ရှိသူများအတွက်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ကုသနည်းများနှင့်ကုသနည်းများကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ သင်၌ပိုမိုကောင်းမွန်သောသွင်းအားစုများရှိပါကမှတ်ချက်ပေးရန်အခမဲ့ပါ။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်နာတာရှည်နာကျင်မှုရှိသောလူနာအုပ်စုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ဤအုပ်စုနှင့်အခြားနာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသူများကိုကုသမှုနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးများရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်လှန်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FB စာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့လိုပဲ og ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေအတွက်နေ့စဉ်ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ငါတို့ကိုလူမှုမီဒီယာထဲမှာပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ရေပူရေကန်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းကို fibromyalgia အတွက်သဘာဝနာကျင်စေသောဆေးများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ၎င်းသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းရှိသူများအတွက်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသနည်း။ ဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်သင်သည်အခြားစာဖတ်သူများထံမှမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ fibromyalgia နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းများပါသောဗွီဒီယိုကြည့်နိုင်သည်။
ရေပူရေကန်တစ်တွင်း၌လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုများစွာရှိသည် - ဒီရှစ်အပါအဝင်
ရေသည်မြှင့်တက်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး၊ ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များအပေါ်အလွန်အမင်းဖိအားမပေးဘဲတင်ပါးဆုံရိုးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခြားအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေပူကန်၌လေ့ကျင့်သောအခါတင်းမာသောဒဏ်ရာများနှင့်ရိုးရာလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သောအမှားများဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးသည်။
ယောဂနှင့်ပိလတ်ကဲ့သို့ရေပူရေကူးကန်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် fibromyalgia နှင့်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများ၏စွမ်းရည်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကို ပိုမို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - သုတေသီများသည် 'Fibro မြူ' ၏အကြောင်းရင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပေမည်။
အဆစ်၊ အာရုံကြောနှင့်ကြွက်သားများသည်အာဟာရလိုအပ်သည် - ၎င်းတို့သည်သွေးလည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့်ရရှိသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးတွင်သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ရေပူရေကန်တွင်လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်၊ စိတ်ရောဂါနှင့် fibromyalgia ရှိသူများစွာကဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးကြောင်းနှင့်စောင်ရေသည်နာကျင်ကိုက်ခဲနေသောကြွက်သားမျှင်များ၊
ရေ၌ရှိသောအပူသည်သွေးကြောများဖွင့်ပေးခြင်းနှင့်ဖော်ပြထားသောနှစ်များထက်ပိုမိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းစေသည်။ နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာများတွင်လူတစ် ဦး သည်မကြာခဏတင်းကျပ်ရန်ငြီးငွေ့လေ့ရှိသည် - ၎င်းအတွက်မလိုအပ်လျှင်ပင်၎င်းသည်ပူပြင်းသောကြွက်သားအဖုများထဲသို့ပျော်ဝင်ခြင်းဖြင့်ရေပူရေကန်လေ့ကျင့်ခန်းသည်သူ့အလိုလိုရောက်လာသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: သုတေသီများကဤပရိုတင်းနှစ်မျိုးသည် Fibromyalgia ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်
ဒါဟာ fibromyalgia နှင့်အတူသူများရှိသည်သောသုတေသနမှတဆင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် "အာရုံကြောဆူညံသံ" ဖြစ်ပွားမှုပိုများ. ဆိုလိုသည်မှာကြွက်သားများ၊ ရွတ်များ၊ ဆက်သွယ်နိုင်သည့်တစ်သျှူးများ၊ အာရုံကြောများနှင့် ဦး နှောက်ပင်တစ်နေ့တာလုံးတွင်တင်းမာမှုမြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်နာတာရှည်ဆူညံသံ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလျှော့ချရန်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းများသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှိသူတစ် ဦး အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ရေပူများမှတဆင့်အပူစီးဆင်းမှုများကြောင့်နွေးသောရေသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သာစေပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပျော့ပျောင်းမှုသည်သင်၏ညာဘက်ဒြပ်စင်ထဲရှိသည့်အခါ - ရေပူရေကန်ဖြစ်သည့်အခါဘေးဖယ်ထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
နေ့စဉ်အသက်တာ၌စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်စွမ်းအင်တိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည့်အခြားအစီအမံများမှာကျန်းမာသောစွမ်းအင်အခြေပြုအစားအစာဖြစ်သည်။ Q10 ၏ထောက်ပံ့ငွေ, ဘာဝနာအဖြစ်အဆစ်နှင့်ကြွက်သားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှု။ ၎င်းတို့သည်အတူတကွ (သို့မဟုတ်သူတို့ဘာသာသူတို့) သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်စွမ်းအင်တိုးပွားစေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အလုပ်ချိန်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းပြုနိုင်ပါသလား။
အိပ်စက်ခြင်းပြproblemsနာကြောင့်သင်ခံစားရပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာသည်များသည်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိပြီးနာကျင်မှုကြောင့်ညတစ်ညတွင်ထပ်ခါတလဲလဲအိပ်လေ့ရှိသည်။
ရေပူရေကန်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ရေပူရေကန်လေ့ကျင့်မှု၏အပြုအမူသည်အချက်များစွာပါဝင်သည်။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးမှာ၎င်းတို့သည်ကြွက်သားတင်းမာမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဆူညံမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် fibromyalgia ရှိသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်အကျွံလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။
နာကျင်မှုကိုပျောက်ကင်းအောင်အိပ်စက်နိုင်ရန်ဆေးဝါးများရှိပါသည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တောင့်တင်းသောလမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေပူရေကန်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အနာကြွက်သားများနှင့်ရေကူးခြင်းများအတွက်အစပျိုးအချက်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုကိုကောင်းစွာအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: အဆိုပါ Fibromyalgia မြူဆန့်ကျင် Self- အစီအမံ
အနာအဆစ် 5. အနိမ့်ဝန်
fibromyalgia ရှိသူများစွာသည်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ (ဥပမာမျက်နှာပြင်ပေါ်၌ပြေးခြင်းကဲ့သို့) သည် fibromyalgia ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ fibromyalgia တွင်ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံအားစနစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်တို့တွင်အလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုများကြောင့်ဤတုန့်ပြန်မှုများသည်အခြားသူများစွာထက် ပို၍ သိသိသာသာပိုမိုအားကောင်းလာသည်။
ရေပူရေကန်လေ့ကျင့်မှုကိုရေတွင်လေ့ကျင့်သည် - ဆိုလိုသည်မှာသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များ၌အားနည်းသည်။ အဆစ်များကိုမြင့်မားစွာဖိအားပေးခြင်းသည်များစွာသောဖြစ်ရပ်များတွင် fibromyalgia နှင့် hypersensitivity ရှိသူများတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဆစ်နာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြွက်သားရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင့်တွင်ကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် fibromyalgia ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိလျှင်၊ သင်၏ဒေသခံဒူလာအသင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါ၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (ငါတို့ facebook group ကိုအကြံပြုပါ။ )အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု - နော်ဝေ - သတင်း၊ စည်းလုံးမှုနှင့်သုတေသန«) တစ်ခါတစ်ရံမှာမင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမင်းပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ၊ ဒါကမင်းရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုယာယီကျော်လွန်သွားနိုင်တယ်။
သင်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုပုံမှန်ဖြစ်သည့်အခါလှုပ်ရှားမှုလုံလုံလောက်လောက်ရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏နှလုံးကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ရေပူရေကန်တွင်သင်သည်အတော်လေးအားစိုက်ထုတ်ပြီးစိတ်ရှုပ်စရာမလိုဘဲသင်၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတက်နိုင်သည်။
ရေပူရေကူးကန်လေ့ကျင့်မှုကိုအမြဲတမ်းအုပ်စုများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် ၂၀ မှ ၃၀ အထိရှိသည်။ ရောဂါတမျိုးတည်းရှိသောလူများစွာနှင့်အတူသင်သည်နာကျင်မှုအခြေအနေနှင့်တူသောအခြေအနေကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သည်။ သင်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်မိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး နှင့်လည်းတွေ့ဆုံကောင်းတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ:7Fibromyalgia နှင့်အတူသည်းခံရန်သိကောင်းစရာများ
သင်လိုချင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းတကယ်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ချန်နယ်သို့အခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ (ဤတွင်နှိပ်ပါ)။ အဲဒီမှာသင်ဟာအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကောင်းများအပြင်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဗီဒီယိုများကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အား fibromyalgia နှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/slik-hjelper-trening-i-varmtvannsbasseng-mot-fibromyalgi-2.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2018-09-20 20:01:152020-05-03 13:37:14Fibromyalgia ဆန့်ကျင်ရေပူရေကန်၌လေ့ကျင့်ခန်းကိုကူညီနိုင်ပုံ
8 Fibromyalgia များအတွက်သဘာဝနာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးအစီအမံ သင့်တွင် Fibromyalgia ရှိပါကဤ ၁၈ ကြွက်သားဆိုးသည့်အချက်များကိုပြောပြနိုင်သည်